Mana isan’andro – Alarobia 15 Jolay 2015 – Athis Fanantenana
Mana isan’andro – Alarobia 15 Jolay 2015
Apokalispsy, Deotoronomia, Ezekiela, I Mpanjaka, II Samoela
EZEKIELA 44. 15-31 F. 6, 7
Sambatra ny mpanompo mijoro
Zadoka, mpisorona sitrak’Andriamanitra.
Niavaka indrindra ity mpisorona ity satria nahay namantatra ny sitrapon’Andriamanitra ka nanohana an’i Davida fony Absaloma sy Adonia zanany nandrombaka fitondrana (2 Samoela 15. 13-15, 24-25 ; I Mpanjaka 1. 7-8). Taranak’olona mahatoky toy izany no tian’i Jehovah hanatona Azy hanao fanompoam-pivavahana (15, 16). Arahin’izy ireo antsakany sy andavany ary ireo fepetra rehetra takian’Andriamanitra amin’izany antso masina izany : fomba fiakanjo (17-19), fifadiana divay (21), fangalana vady voafantina (virijina na vady navelan’ny mpisorona : 22).
Ny andraikitra lehiben’ny mpisorona.
Voafintina ao amin’ny antson’ny mpisorona ny antson’ny firenen’Isiraely manontolo, firenena masina (Deotoronomia 14. 2). Hampianatra ny olona hahay hanavaka ny masina sy ny madio no andraikitriny (23) ; hanavaka ny marina sy ny tsy marina koa no ilana azy rehefa mitsara ny olona izy (24). Izay zavatra rehetra mety mandoto azy noho izany dia mila ialany avokoa : fihinanana biby maty ho azy (31), fidirana am-paty afa-tsy amin’ireo havany akaiky ihany (25). Na amin’izany aza anefa dia mbola mila manao fanatitra noho ny ota vao afaka manao fanompoam-pivavahana indray (27).
Jehovah no lovany.
Tsy mba hanana zara-tany ny mpisorona fa Jehovah mihitsy no anjarany (28) ary ny fanatitra aterin’ny olona ho an’Andriamanitra no angalana ho sakafony (29-30). Toy mampahatsiaro lalandava ny fisiany fa tsy tokony ho diso mifikitra amin’ny lovan’ny tany izay ifandroritan’ny zanak’olombelona ny vahoakan’Andriamanitra.
Ialao izay tsy masina:
Amin’ny maha-mpisorona anao ao amin’ny fanekena vaovao (Apokalypsy 1. 6) dia fadio izay rehetra mety mandoto ny fanahy.
Teny mivohitra: Fahamendrehana, Sitra-po
Mofon'aina - Alarobia 15…